Wacom weputara Cintiq iri na isii maka ụmụ akwụkwọ nọ na CES | Akụkọ akụrụngwa
Companylọ ọrụ ahụ na-ekwuwapụta ọbịbịa nke ọgbọ na-esote nke ntinye ihe ntanetị mmekọrịta na usoro atụmatụ ejiri nke ga-arụ ọrụ dị ka ntinye ihe omuma maka ulo oru umuaka na umu akwukwo.
E gosipụtara Cintiq ọhụrụ maka ụmụ akwụkwọ na usoro nke Consumer Electronics Show, Wacom ekwuputala ọkwa ọhụụ nke ngosipụta pen. Wacom Cintiq 16 bụ ihe dị egwu maka eserese teknụzụ, eserese na eserese dijitalụ, ma tinye Wacom nke 35 afọ nka na ahụmịhe.
Ezubere Cintiq ọhụrụ maka ndị okike na-eto eto okike, ndị okike okike, ụmụ akwụkwọ nka, na ndị nwere mmasị n'ihe gbasara ntụrụndụ bụ ndị na-achọ ahụmịhe Wacom a tụkwasịrị obi, mana anaghị achọ atụmatụ ọ bụla dị elu dị na ahịrị ngwaahịa Cintiq Pro. nhọrọ mara mma maka ndị na-arụ ọrụ pen pen okike na-achọ nhọrọ dị elu, ma ọ bụ ndị okike na-achọsi ike chọrọ ịnwale Ahụmahụ Wacom na skịl maka oge izizi.
Onye isi oche ndị isi nke Wacom's Creative Business Unit, Faik Karaoglu, kọwara na ngosipụta:
Ihe ngosi Wacom na stylus aburu ihe di nkpa nye ndi okike. Ugbu a, anyị na-ewetara otu teknụzụ mkpịsị mkpịsị ahụ, njiri mara nke ihe na etu esi arụ ọrụ na ndị na-achọbu ya, mana ịmalite ọrụ ha nwere ike ọ gaghị enwe ike ị nweta ọtụtụ atụmatụ Wacom ọkachamara. Anyị kwenyere na ọ bụ azịza zuru oke maka okike okike, kamakwa maka ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ teknụzụ na ngalaba ihe owuwu ụlọ, atụmatụ, imepụta ụlọ ọrụ ma ọ bụ injinịa, yana ọbụnadị ndị ọkachamara okike achọpụtara ngwaọrụ nke abụọ maka ọfịs ha ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha.
Cintiq 16 gụnyere Wacom Pro Pen 2 - pen-tech-tech na ọnụahịa dị ọnụ. Ọ nwere ogo 8192 nke nrụgide nrụpụta na ntanye akara maka nkenke na-enweghị atụ. Ekele maka usoro resonance electromagnetic nke Wacom, ọ dịghị mkpa itinye ma ọ bụ gbanwee batrị pen. Ngosipụta mkpebi 1920 x 1080 Full HD na-egosipụta 72% NTSC, iko a na-emeso nke matte, na mmetụta nke pen-na-akwụkwọ. Cintiq 16 nwere atụmatụ mara mma ma mara mma, na-eme ka ọ dị mfe itinye ya na gburugburu ọrụ gị, ma nwee njikọ eriri USB 3-in-1 pụrụ iche nke na-ebelata mkpọtụ. Cintiq ọhụrụ a dị mma maka ndị ọrụ chọrọ iji aka ha gosipụta oghere ha na ihe ngosi ha.
Bọchị ịkwụ ụgwọ na ntọhapụ
N'okwu a, ụlọ ọrụ ahụ mara ọkwa na ụbọchị mwepụta dị ezigbo nso na nke ahụ bụ A na-atụ anya iru ụlọ ahịa na njedebe nke ọnwa a nke ọnwa Jenụwarị. Banyere ọnụahịa Wacom ọhụrụ anyị na-ekwu maka ya 599,90 euro nke ọnụahịa mkpọsa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Wacom gosipụtara Cintiq 16 ọhụụ maka ụmụ akwụkwọ na CES
LG weputara OLED TV nke mbu n’uwa